जाडोको मौसममा पिनासले सतायाे ? यसो गर्दा आराम पुग्छ… « Deshko News
जाडोको मौसममा पिनासले सतायाे ? यसो गर्दा आराम पुग्छ…
जाडोको मौसम छ । यो मौसममा रुघाखोकीले त सताउँछ नै, त्यो सँगसँगै पिनासले पनि अत्यधिक सताउने गर्छ । पिनासले सताएपछि थुप्रै समस्याहरु साथसाथै आउने गर्छ । आँखा चर्कोसँग दुख्ने, नाकको डाँडी दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्याहरुले जीवन नै अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।
आउनुहोस्, हामी पनि यो पिनासको बारेमा र त्यसबाट राहत पाउने उपायहरुका बारेमा केही चर्चा गरौं ।
पिनासलाई अंग्रेजी भाषामा साइनासाइटिस भनिन्छ । हाम्रो नाकको नरम हड्डीको दुवैतर्फ एउटा एउटा खाली भाग हुने गर्छ, जसलाई साइनस (sinuses) भन्ने गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा त्यो भाग हावाले भरिएको हुन्छ । तर कुनै पनि कारणले जब त्यो भागको नरम झिल्ली जस्तो तन्तुमा संक्रमण हुन्छ, तब त्यस अवस्थालाई साइनासाइटिस (Sinusitis) अर्थात् पिनास भन्ने गरिन्छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नाकमा म्युकस हुने गर्छ । तर जब पिनास हुन्छ, खाली ठाउँबाट त्यो म्युकस बाहिर निस्कन सक्दैन । त्यस क्षेत्रमा अवरोध आउँछ । त्यस क्षेत्रमा हुने पातलो झिल्ली संक्रमित हुन पुग्छ ।
नाकबाट सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ । दमका जस्तै लक्षण देखापर्न थाल्छ ।
पिनास हुनुको एउटै कारण भनेको साइनस हड्डीमा हुने संक्रमण हो । त्यो संक्रमण हुनुको मुख्य कारण चाहिँ चिसो नै हो । अत्यधिक मात्रामा चिसो पदार्थ (फ्रिजका वस्तुहरु चिसै खाने) सेवन तथा चिसोमा हिँड्डुल गर्नेहरुमा यो समस्या बढी देखापर्छ । त्यसैगरी, वातावरणीय प्रदूषण, धूलोधुवाले पनि यो समस्या पैदा गराइदिने गर्छ । कतिपयलाई चाहिँ घरपालुवा जनावर तथा बोटविरुवाहरुको एलर्जीका कारणले पनि यो समस्या देखापर्न सक्छ । त्यसबाहेक, नाकको हड्डी बांगो हुने समस्या भएकाहरुमा यो समस्या देखापर्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
पिनासले सामान्यतः धुलो धुवा अनि चिसोको स्थितिमा बढी सताउने भएकोले त्यसबाट बच्ने सबैभन्दा प्रमुख उपाय भनेकै त्यो स्थितिबाट बच्नु पा पन्छनु हो । अर्थात् पिनासबाट बच्नको लागि सबैभन्दा पहिले धुलोधुवा र चिसोबाट बच्नुपर्छ । चिसो मौसममा तथा धुलो धुवाभएको वातावरणमा हिँड्डुल गर्दा मास्क लगाउने गर्नुपर्छ ।
चिसोबाट बच्नु भनेको आफू बस्ने कोठाहरु पनि न्यानो हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सकेसम्म घाम लाग्ने कोठामा बस्ने, दिनहुँ घाममा केही समय बस्ने गर्नु पनि पिनासमा लाभदायक हुन्छ । एलर्जीका कारण पिनास भएको हो भने यथासक्य एलर्जी गराउन सक्ने प्रमुख कारणहरु धुलोधुवा तथा घरपालुवा जनावरबाट टाढा रहनुपर्छ ।
पिनासबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपायहरुमा प्रशस्त मात्रामा पानी तथा झोल पदार्थहरुको सेवन गर्नुपनि हो । प्रशस्त मात्रामा पानीको सेवनले शरीरका विषाक्त पदार्थहरु बाहिर निस्कन्छ भने झोल पदार्थहरुको सेवनले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
पिनास हुने मानिसले आफ्ना प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने खानेकुराहरु प्रशस्त खाने गर्नुपर्छ । चिसो मौसममा पाइने, भिटामीन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने सुन्तला , कागती जस्ता फलफूलको सेवनले पनि पिनासमा राहत मिल्छ ।
पिनासको संक्रमणमा जलनेती गर्दा पनि आराम मिल्छ । खासगरी, एउटा करुवा जस्तो टुटी भएको भाडामा नून र मनतातो पानी राखेर नाकको एउटा प्वालबाट पानी पठाएर नाकको अर्को प्वालबाट पानी निकाल्ने प्रक्रियालाई पालोपालो गर्ने हो भने पनि हड्डीको संक्रमण पखालिने, नूनतातोपानीले सेकिने भएको हुँदा निक्कै राहत मिल्छ र विस्तारै संक्रमण निको हुँदै जान्छ ।
पिनासको संक्रमण हुने व्यक्तिहरुले आफ्नो खानपीनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष गरेर शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने फलफूल, सागपात तथा खानेकुराहरुमा बल गर्नुपर्छ । पिनास हुने व्यक्तिले खानपीनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुुरा के हो भने सकेसम्म कुहाएर बनाइएका तथा बासी खानेकुराहरु, चिसा खानेकुराहरु खानु हुँदैन । कुहाएर बनाइएका खानेकुराहरु भन्नाले गुन्द्रक, सिन्की, बोतलमा हालिएका पुराना अचारहरु आदि बुझ्नुपर्छ ।